वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारी : कुन कुन पदमा कहाँ कहाँ खुलेको छ ? कसरी गर्ने अप्लाई ? - Nepalgunj Business
वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारी : कुन कुन पदमा कहाँ कहाँ खुलेको छ ? कसरी गर्ने अप्लाई ?
नेपालगञ्ज -बैंकमा जागीर गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यतिबेला सुनौलो अवसर छ । थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरिरहेका छन् । आफ्नो इच्छा र योग्यताअनुसारको जागीर खाने अवसर तपाईँलाई पर्खिरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ १४, २०७६ 2:03:30 PM